သေသူကို အသက်ပြန်သွင်းနိုင်ဖို့ အလောင်းငါးလောင်းနဲ့ သုတေသန လုပ်မည် | Buzzy
သေသူကို အသက်ပြန်သွင်းနိုင်ဖို့ အလောင်းငါးလောင်းနဲ့ သုတေသန လုပ်မည်
မသေလိုသူတွေရဲ. အိပ်မက် တကယ်ဖြစ်တော့မလား ?
တက္ကဆက်ပြည်နယ်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ စီမံခဲ့တဲ့ Timeship Building သုတေသနလုပ်ငန်းကို စတင်လုပ်ကိုင်တော့မှာပါ ။ သေသူတွေကို ပြန်လည်ရှင်သန်လာအောင် လုပ်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပြီး အေးခဲထားတဲ့ လူသေအလောင်း ငါးလောင်းနဲပ ဒီစမ်းသပ်မှုကို စတင်သွားမှာပါ။
ဒီစမ်းသပ်မှု ပြုလုပ်မယ့် အဆောက်အဦးမှာ လူသေအလောင်းတွေသာမက ဆဲလ်နဲ့ တစ်ရှုးတွေအပါအဝင် လူအဂါင်္အစိတ်အပိုင်းတွေ နဲ့ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ ပစ္စည်းတွေ ရှိနေမှာပါ ။ ဒီစီမံကိန်းကို စတင်နေပြီမို့လို့ အနာဂတ်မှာ သေဆုံးပြီးသားလူတွေကို အမှန်တကယ်ပဲ အသက်သွင်းနိုင်မလား ဆိုတာတော့ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ ။